A, B, AB , O သွေး ပိုင်ရှင်တို့အကြောင်း | အိမ့်မှူးသော်
စိတ်မရှည်ဘူးလို့ ထင်ရတဲ့ ပုံသဏ္ဍာန်ရှိတယ်။ နောက်ပြီး ရိုးအီနေတဲ့ ထပ်ကာထပ်ကာ လုပ်ရတဲ့ အလုပ်တွေနဲ့သူတို့နဲ့ အံဝင်ဂွင်ကျ ဖြစ်လေ့မရှိဘူး။ လောလောလတ်လတ် ကိစ္စတွေကို လွယ်လွယ်နဲ့ မမေ့တတ်ပေမဲ့ အတိတ်နဲ့အမှတ်တရတွေကို တော့ မေ့သွားတတ်ကြတယ်။ မိမိခံစားချက်ကို ပေါ်လွင်အောင် ဖော်ပြတတ်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ လိုအပ်ရင် အေးအေးဆေးဆေးနဲ့ အချက်ကျကျ ရှင်းပြပြီးဖြေရှင်းတတ်တယ်။
ချစ်စံအိမ် 4:23 AM
mstint 6:04 AM
အားကောင်းသော ရောဂါခုခံကာကွယ်မှု ရှိသည်။
နို့နှင့် နို့ထွက်ပစ္စည်းတို့ကို နှစ်သက်သည်။
ဆန်းသစ်တီထွင်မှုရှိပြီး ဖိစီးမှုကို အကောင်းဆုံး တန်ပြန်နိုင်သည်။
ထက်မြက်၊ သွက်လက်နေစေရန် ရုပ်နှင့် စိတ် တို့၏ လှုပ်ရှားမှုများဘက်ညီနေဖို့လိုပါသည်။
တီတင့်အတွက်တော့ ရာနှုန်းပြည့်မှန်တယ် မှူးသော်ရေး)
၉၀% လုံးဝ ငြင်းမရအောင်တူပါ၏ ...
မမေ့တတ်သူ 4:49 PM
ဟုတ်တယ်ဗျို. ကျွှန်တော်က AB ဗျ အခုေ၇းထားတာတွေ (၉၀)%ကျော်ကျာ်လောက်ကိုမှန်တယ်........
thank u....90% right!!!
Check out my webpage: ford ranger
အိုသွေးတွေရဲ့စွမ်းရည်ကအားလုံးထဲမှာအကောင်းဆုံးပဲနဲ့တူတယ် ကံမကောင်းလိုက်တာ ကျွန်တော်က ဘီသွေးဖြစ်နေတယ် အိုသွေးလိုအကောင်းမြင်တတ်တဲ့ပင်ကိုယ်စွမ်းရည်မျိုးပိုင်ချင်တယ်ဗျာ